Trump, Q-Anon iyo 'nadiifinta fikirka' qoto dheer '(Robert Jensen, Janet Ossebaard): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 25 Maarso 2020	• 15 Comments
In kasta oo Robert Jensen u muuqdo inuu ka leexday xisbiyadii xisbiyada garabka midig dhawaanta, haddana weli wuxuu taageere weyn u yahay Trump. Fiidiyowyadiisa hadda si aad ah ayaa loo arkaa, waana sida xiddigii xiddigga cusub ee meeraha ku jira; haweeney rumeysan UFO iyo wareegyada dalaga: Janet Ossebaard.
Taasi way fiicantahay lafteeda in la aamino UFO ama wareegyada dalaga, laakiin inta aan kahadley waxaan aqoonsaneynaa istiraatiijiyadda kuxirida runta raadinta iyo kolder. Si kastaba ha noqotee, labadaba Jensen iyo Ossebaard waxay aamisan yihiin in Donald Trump dunida badbaadin doono. Ossebaard tan ayaa hadda si cad loogu xiriirinayaa sheekada 'qotodheer' iyo 'Q Anon'. Robert Jensen wuxuu u qaadanayaa waxoogaa khiyaano ah, maxaa yeelay wuxuu u badan yahay inuu isku dayo inuusan la xiriirin aragtidaas shirqoolka ah ilaa iyo inta suurta gal ah.
Waxaan isku dayi doonaa inaan kuu macneeyo sababta aan u aaminsanahay inaan wax ka qabaneyno saami qeybsiga amniga ee halkan. Anigu taas uma aan samaynayo inaan dadka ka dhigo madow, laakiin waxaan sameeyaa inaan ugu yaraan ku siiyo aragti ka duwan arrinta, si aad ugu dari karto tixgelintaada.
Maxey yihiin falalka badbaadada dadkaasi?
Pafts nabdoonaanta waa dad iyagu, iyagoo matalaya isla awood isku mid ah oo aan u maleyneyno inaan aqoonsan karno ka dambeya warbaahinta, oo aad ugu caan baxay warbaahinta kale isla markaana aan la kulmin faafreebid yar warbaahinta ama warbaahinta bulshada. Waxay ku riixaan warbaahinta kale ee badidooda shabakadooda. Khadka tooska ah ayaa waliba ka warbixiya iyaga (xitaa haddii ay yihiin kuwa xun: maxaa ku siin kara inaad fiiro gaar ah yeelato). Intaa waxaa sii dheer, waxay u badan tahay inay si xoogan u taageerayaan lambarka loo baahan yahay IMBers iyo dadka si fudud ugu dhaca 'sheekada dhawaaqa wanaagsan', ee warbaahinta bulshada.
Wixii ka dambeeyay 911, tusaale ahaan, waxaad ku leedahay qof sidan oo kale gudaha Mareykanka; Qof isu soo urursaday taageerayaal waaweyn isaga oo bilaabay riyo kale oo ah aqrinta rasmiga ah ee 911. Markaad doonto male eegayso in aad rumaysan tahay iyo in kale 911 waxay ahayd shaqo gudaha ah. Ace Baker-kan wuxuu kasbaday inuu helo waxbadan oo soosocda dadka ka mid ah kuwa aaminsan in 911 uu yahay shaqo gudaha ah. Wuxuu ka hadlay dhammaan noocyada fikradaha wuxuuna gubay kuwa uu u malaynayay inay yihiin sheekooyin xun. Wuxuu ahaa, sida ay u muuqatay, wajiga 'dhaqdhaqaaqa runta', sidii loogu yeedhay.
Markii uu raacay raad aad u weyn, wuxuu qabtay wax aan qofna fileynin. Intii lagu gudajiray bandhiga raadiyaha, wuxuu si lama filaan ah u bilaabay inuu macsalaameeyo waalidkiis, xaaskiisa iyo caruurtiisa oo waxaad maqasheen rasaas, ka dib waa ay aammusay oo soo-jeediyaha wuxuu yiri: "Waxaan rajeynayaa in tani aysan run ahayn." In yar ka dib, isla Ace Baker wuxuu noqday mid aad u nool markale. Sidan ayuu ku aflagaadeeyay kalsoonida 'dhaqdhaqaaqa runta' hal go '. (dhagayso) halkan jajabkii)
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira istiraatiijiyado badan oo kale, sida kuwa magac kale oo caan ah loogu yaqaan 'dhaqdhaqaaqa runta' oo markii dambe la shaaciyay inuu hoggaamiye ka yahay kooxda 'carruurta Ilaah'; dar dar ah oo dhiirrigelinaya galmada carruurta yaryar. Sababtoo ah Zen Gardner wuxuu awood u yeeshay inuu ku xiriiro dad badan 'dhaqdhaqaaqa runta', dadkaas oo dhami waxay ku qaadeen cudurka.
Qaar badan oo ka mid ah boggaga badbaadada ee saafiga ah ayaa adeegyadu u adeegsadaan inay ku dhawaaqaan run cad ama run muuqata. Sababtoo ah waxaa lagu riixayaa meel kasta, waxay helayaan raaco fara badan. Waxaan isla aragnaa Robert Jensen iyo Janet Ossebaard. Hadafka muddada fog ayaa ah in sidii doon kalluumeysi ah ay u jiidi karaan dad badan intii suurtagal ah shabaqa badbaadadooda, ka dibna ay ku qarxi doonnida kalluumeysiga fadeexad. Tani waxay xaqiijineysaa inaad ceebeyn karto dadkaas halista ah isla markaana aad ka ilaalin karto inay hadda ku socdaan si waafaqsan warbaahinta guud iyo siyaasada.
Nadiifinta qotoda dheer iyo Q Anon
Labaduba Robert Jensen iyo Janet Ossebaard labaduba waxay leeyihiin rajo weyn Donald Trump. Qunsulka Q Anon wuxuu salka ku hayaa qof fariin qarsoodi ah ku diro khadka tooska ah ee internetka, kaasoo ka hadla qotodheer oo uu Trump doonayo inuu tuuro iyo Donald Trump oo la dagaallamaya arrintaasi. Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in Q Anon uu yahay nooc barnaamijka AI ah waxaana sidoo kale soojeediyay xulashadaas qodobbadii hore.
Supereputer-ka IBM ee 'Deep Blue supercomputer' wuu guuleystay al ee 1996 Horyaalka adduunka Kasparov oo leh chess iyo Google Alphabet's Kumbuyuutar Kumbuyuutar ah 2016 oo ah tartanka adduunka ee ciyaarta ugu adag. Tag oo garaac. Sidaa darteed waa wax la qaadan karo in dawladuhu adeegsadaan kumbuyuutarro super ah istiraatiijiyadooda iyagoo la kaashanaya warbaahinta iyo warbaahinta kale, marka lagu daro dhammaan xogta weyn ee shacabka (oo ay ku ururiyaan waqtiga dhabta ah).
Laakiin aan taas uga baxno dhexda. Mabda 'ahaan, waxaan u qaadan karnaa inay dowladuhu ogyihiin inay had iyo jeer mucaarad ku yihiin dadka dhexdooda. Markaa haddii ay iyagu is dhisi karaan mucaaradkaas laftooda oo ay soo qabtaan dad fara badan, si wanaagsan bay wax u qaban doonaan. S Anon wuxuu qayb uun ka noqon karaa istiraatiijiyadda saafiga ee badbaadada.
Tusaale fikradaha Q Anon ee aan shalay qaatay. Dhammaantiis waxay u muuqataa wax sii sheegid ah, markaa waxay siinaysaa aragti ah in Q runtii uu la shaqeynayo Trump. Sidee kale oo ay ku ogaan karaan waxaas oo dhan? Kaliya akhriso:
Xukunka guryuhu wuxuu sii soconayaa ilaa dhamaantood ay ka dhamaan doonaan Abriil 10 (Jimce Wanaagsan). Kahor taas, 10ka maalmood ee "mugdiga" waxay bilaabmi doontaa subaxa Abriil 1, maalmahaasna waxay dhamaan doonaan dhammaadka Abriil 10.
Isla markiiba bilowga 'gudcurka', POTUS wuxuu farriin tweet ah u diri doonaa: Walaalahayga Mareykanka ah ... Dabaylaha ayaa dul saaran …… "(" Saaxiibadayda Mareykanka ah ... Duufaanta ayaa timid ...) "Nooca 'Abriil 1' marka hore yareyn walaacyada ku saabsan muuqaalka "mugdiga." Markuu "mugdiga" dhacayo, waxaa jiri doona gariir argagax leh oo ku hareereysan Coronavirus iyo xaalad caafimaad oo deg deg ah oo caalami ah. Xaaladda degdegga ah ee caafimaad waxaa looga dhawaaqi doonaa horraantii Abriil 1 magaalooyin badan (iyo waddammada. Vert.).
Dad badan ayaa isqarxin doona gurigoodana badankood waxay dhisi jireen sahay cunto, iwm.
Halkan Australia, dadka bilaa shaqada ah iyo hawlgab ah waxay heli doonaan $ 31 markay tahay Maarso 750. Wadamada kale sidoo kale waxay sameyn doonaan qabanqaabooyin noocan ah si dad yar ay gaajo ugu dhintaan. Dukaamada degdega ah qaarkood waxay ahaan doonaan kuwo furan si ay u iibiyaan alaabooyinka ugu muhiimsan, laakiin dukaamada badankood way xirnaan doonaan.
Inta lagu jiro 10ka maalmood ee 'mugdiga', ma jiro warbaahinta bulshada ama internetka. Waxaa jiri doona koronto, laakiin raadiyaha iyo TV-ga ma jiri doonaan. Ma daabici doono wargeysyo. Ciidan kasta oo waddan ka mid ahi waxay xirayaan daabacayaashan.
POTUS waxay lahaan doontaa habka kaliya ee la heli karo ee lagu gaadhsiinayo dadka adduunka oo dhan 10ka maalmood ee 'mugdiga' taasna waxay ku noqon doontaa Nidaamka Warfaafinta Degdegga ah. Ciidan kasta oo adduunka ah waxay u gudbin doonaan TV-yada iyo aaladaha dalalkooda.
POTUS wuxuu joogi doonaa maalmaha "mugdiga", ha noqoto dibad joog, ama diyaaradda Airforce One. Waxa loogu yeero cudur-daarka isticmaalka Airforce One waxay noqon doontaa badbaadada iyo / ama halista infekshinka. Nidaamka Baahiyaha Degdegga ah waxaa laga baahin doonaa Airforce One. Marka waxaa jiri doona xannibaad wargeys oo wax ku ool ah, marka laga reebo POTUS.
Dukumiintiyo xirfadlayaal ah oo si xirfadaysan loo sameeyay ayaa dunida oo dhan looga baahin doonaa TV-yada iyo aaladaha kale iyada oo loo sii marayo Nidaamka Warfaafinta Degdegga ah. Waxyaabaha ku jira waxay sharxi doonaan dhammaan dhibaatooyinka, dambiyada iyo faahfaahinta wax walba. Nuxurku wuxuu noqon doonaa mid saaxiibtinimo leh qoyska waana ka weynaan doontaa su'aasha.
POTUS wuxuu sharixi doonaa sida ay u codsadeen militariga Mareykanka inuu isu soo dhiibo Gobolka Deep iyo inuusan "siyaasad" aheyn. Wuxuu xaqiijin doonaa macluumaadka Q. Dukumiintiyadan ayaa soo bandhigi doona qirasho la duubay oo ka timid siyaasiyiinta caanka ah ee Deep State iyo shaqsiyaad caan ah. Dhismaha kontoroolka adduunka ayaa la sharixi doonaa. Caddaymaha dambiyada ayaa la soo bandhigi doonaa. Bayaanka maxkamadaha ciidamadu waa la soo bandhigi doonaa.
Soo bandhigyadaan waa la baahin doonaa, dheh 8 saacadood maalintii, inta lagu jiro 10ka maalmood oo buuxa. Ku celcelin ayaa dhici doona inta ka harsan maalinta si kuwa weli shaqeeya iyo samatabbixiyeyaashu ayan wax u dhumin. Sidaa darteed idaacadaha ayaa sii socon doona 24 saac maalintii. Qoysasku ma lahaan doonaan waxa ay arkaan mooyee. Fiidiyowyada ugu argagaxa badan oo leh caddeyn uma noqon doono qof walba, waxaa daawan kara kuwa doonaya inay 10 maalmood kadib 'mugdiga' internetka ku jiraan.
Waxaa jiri doona argagax weyn, naxdin iyo jahwareer. Doorkayagu sida wadaniyiinta ah wuxuu ahaan doonaa inaan helno deganaansho, qirasho, naxariis, iyo dib-u-xaqiijin. Wadaniyiin badan oo horey uga baqay inay hadlaan ayaa ku dhici doona.
Suurtagal maaha, laakiin suurtagal, in JFK Jr iyo kuwa kaleba ay gacan ka geystaan ​​aaminaadda hawlgalka. Marka 10ka maalmood ee "mugdiga" ee ku yaal dhamaadka Jimcaha Good, waxaa jiri doona dilal ballaaran oo xagga ruuxiga ah.
Jimcaha Wanaagsan, bini-aadamka ayaa loo sheegi doonaa in fayrasku hadda yahay mid nabdoon oo qofku ka bixi karo oo uu dib isugu soo noqon karo. Kaniisadaha, sunagogyada iyo masaajidda waa la buuxin doonaa. Dhibaatooyin badan ayaa jiri doona, laakiin sidoo kale waa la qabsan doonaa.
Qayb yar, laga yaabee 5%, ayaa ka bixi doona xakamaynta oo maskaxda ka fogeeyay inay aqbalaan runta. Sidii caadiga ahayd, waxay sababi karaan carqalad.
Gobolka Deep wuxuu lumi doonaa xukunka wax waligiis. Milatariga ayaa kormeeri doona xarumaha TV-yada iyo daabacayaasha joornaalada si looga hortago kharribaad. Meesha madow ka dib, warbaahinta la aasaasay ayaa gebi ahaanba la soo deyn doonaa mana awoodi doonto inay beeniso sheekada.
Shakhsiyaadka Deep State ee aan isa soo dhiibin oo aan loo masaafurinin Guantanamo Bay waxay isu soo dhiibi doonaan dhamaadka ismiidaaminta ee Abriil 11-12, 2020. Shaqsiyaadka aan aaminka aheyn waa loo ogolaan doonaa inay iska difaacaan dadka badan ee lagu wargaliyay.
Haatan kor ku xusan ayaa sifiican mar labaad u qurux badan iyadoo shirkiisii ​​jaraa'id ee xalay ee Doald Trump uu ku dhawaaqay in uu doonayo in dadka Mareykanka ah ay awood u yeeshaan in ay si xor ah u dhaqaaqi karaan mar kale oo ay aadaan kaniisadda inta lagu gudajiro Easter (eeg businessinsider.com). Markaa sheekada Q Anon waxay umuuqataa inay si aan kala go 'lahayn ula jaan qaaddo waxa Trump leeyahay, taas oo ka dhigaysa mid lagu kalsoonaan karo. Qofna ma garto in adeegyadu caqli ku filan u leeyihiin inay ka ciyaaraan labada xero.
Marka maxaa qaldan Robert Jensen
Ma maqli doontid anigoo dhahaya waxbaa qaldan Robert Jensen shaqsi ahaan. Waxaan u maleynayaa kaliya inuu u shaqeynayo shabaqa badbaadada isla markaana uu yahay macallin tababbaran oo tababaran oo yaqaan sida saxda ah ee loo buuxiyo shabaqa amniga. Istaraatiijiyaddiisa weli ma aha inay si furan ugu dhawaajiso aragtida Q Anon. Si kastaba ha noqotee, wuxuu horay u amaaney Donald Trump muuqaalkiisii ​​ugu dambeeyay ee Trump isagoo sheegay in xalka uusan aheyn inuu ka sii xumaado dhibaatada.
Jensen ayaa ku adkaystay in talaabooyinka xiritaanka coronavirus-ka ay aad u liitaan dad badanna ay ku raaci doonaan isaga. Wuxuu diiradda saaraa heerarka dhimashada iyo xiriirka uu la leeyahay burburka dalka oo dhan, oo ay ku jiraan saameynta dhaqaalaha. Isaguba taas buu helayaa Bloomberg dokumenti, kaas oo aan hore ugula xiriiray maqaal hore. Waxay sharraxaysaa in 99% dadka ku dhintay Talyaaniga Talyaaniga durba ay heleen shuruudo kale oo ay dhiman karaan.
Hadda waxaad dhihi doontaa:Waa hagaag iyo? Maxaa ka khaldan taas? Isagu si buuxda sax buu u yahay markaa!?Waxaan kor ku sharraxay in marabiyada nabdoonaanta aysan daruuri ahayn been sheega. Xitaa waxay ku tusin karaan runta oo dhan. Ujeedada marabiyada nabdoonaanta waa in lagugu xiraa xubin gaar ah oo fikir ah ama qof. Qofkaasi kiiskan waa Donald Trump.
Haddii mar dambe ay soo baxdo in Donald Trump uusan gebi ahaanba nadiifinaynin qoto-dheer iyo haddii uu mar dambe isu beddelo in adduunku ka ooyi doono in Donald Trump, tusaale ahaan, uu sameeyay khalad aad u weyn isagoo ka tegaya Mareykanka waddada mar kale inta lagu jiro dhammaadka toddobaadyada Ciidda Masiixiga (maxaa yeelay haddii, tusaale ahaan, cudurka faafa ee coronavirus si lama filaan ah dib ugu soo laabto, laakiin hadana aad uga sii daran), markaa taageerayaasha Donald Trump iyo Jensen ayaa hal mar isku dhacay. Markaa qof walba wuxuu ku baaqayaa in la xidho dhammaan kuwa ka walaacsan ee diiday inay arkaan sida ay khatarta ugu weyn tahay fayraska corona.
Fadlan la soco: warbaahinta ayaa sidoo kale faafin kara dib-u-faafin suurtagal ah, laakiin markaa markaa xor uma noqon doontid inaad si adag uga fikirto istiraatiijiyadda badbaadada iyo dhirbaaxada marinka kalluumeysiga ee Robert Jensen. Xaqiiqdii, 'fikirka xasaasiga ah' waa xaalada nafsaani ee ugu khatarsan waqtigaas.
Maxaa ka qaldan Janet Ossebaard
Waa inay cadaato inaanan banaanaanin inaan weeraro shaqsiyaadka, maadaama aan qabanayay muddo 7 sano ah. Ma jecli 'suunka ka hooseeya'. Waxaan uga digayaa istiraatiijiyad la fiirsanayo. Xaqiiqda ah in ay jiraan dad si qarsoodi ah ugu shaqeeya howlaha oo u oggolaada in la geeyo maaddaama saamixiyeyaasha saafiga ah ee nabadgelyadu ay damiirkeenna iyo karma u shaqeeyaan.
Dhanka Janet, way iska cadahay inay ku dhawaajiso aragtiyaha Q Anon fiidiyowyadeeda. Marka waxay runtii kugu dhiirigelineysaa inaad dib u fadhiisatid oo aad sugto oo aragto waxa dhaca. Badbaadinta Trump waxay u egtahay inay soo dhowdahay. Horaan u qoray taas taas ayaa sheegay in en ayaa sheegay in maqaal.
Maxaan sameyn karnaa markaas Waa hagaag Rumeyso, maxaa weli wanaagsan?
Sida saxda ah fikirkaas waa saameynta lagu guuleysto markii aad la kulanto niyad jab markii lagu qabtay shabag nabadgelyo doon markabkii oo dhana wuu daatay. Taasi waa sababta aan u sii tilmaamo inay ku saabsan tahay miyirkaaga. Taasina waa dareen kale oo uu Robert Jensen afduubaya ereygaas ee ku saabsan baahintiisii ​​ugu dambeeyay.
Waxay ku saabsan tahay 'miyirkaaga' dareenka 'asalka jiritaankaaga'
Buuggayga waxaan kaga hadlayaa wacyigelinta dhabta ah waxaanan kaga hadlayaa fayraska guud-wada-gala ee doonaya inuu innagu ina haysto. Waxaan sidoo kale saadaaliyay in masiibo ku jirto tan, sida aan hadda la kulano. Tan ugu muhiimsan, si kastaba ha noqotee, waxaan sharxaayaa inaanan ku guuleysan karno wax badan heerka jir ahaaneed. Dhab ahaantii ma waxaad u maleyneysaa in haddii beeraleyda oo dhami ay waddooyinka maraan ama haddii aan kulligeen wada jiifsanno, aan wax beddeli karno? Gobolku wuxuu horeyba u muujiyey inuu xidhayo dhaqaalaha oo dhan isaga oo aan wax ku dhicin.
Waxa aan kari karno iyo waxa aan sameyn karno ayaa ka sarreeya rajooyinka shisheeyaha kale ee badbaadada nooga yimaadda; waxaay dhaaftay rajada laga qabo in Q Anon iyo Trump ay badbaadadeena imaan doonaan. Waxa aan sameyn karno ayaa aad uga weyn! Waxaan sameyn karnaa waxay tahay inaan aqoonsano awoodaada asalka ah ee asalka ah. Taas ayaan ku sharraxay buugga. Waad iibsan kartaa taas. Waxa kale oo aad si bilaash ah ugu aqrinkartaa qodobbada badan, laakiin sababta oo ah waxaad joogtaa guriga iyo sababtoo ah waxaad haysataa waqti aad wax ku akhriso; maxaa yeelay waxaad ogaan kartaa awooddaada dhabta ah; maxaa yeelay waxaan ka adkaan karnaa cabsida iyo sababta oo ah waxaan awoodnaa waxbadan oo aan ka fikirno: sidaa darteed suurta galnimada inaan aqriso soo koobiddan:
Xusuusin: Waxaa dhowr jeer igu dhalleeceeyay maalmihii ugu dambeeyay raadinta iibka buugaagta si aan lacag u sameeyo. Buugani wuxuu ku qornaa codsi akhristayaasha si loogu daro (akhriska bilaashka ah) qodobbada sanadihii la soo dhaafay wax lagu akhriyi karo hal maalin.
Soodhawrka xiriiriya: threadreaderapp.com, businessinsider.com, Bloomberg.com
Tags: Anon, qoto dheer, featured, Janet, Jensen, nadiifi, Caano-gadhka, Q, Robert, Trump, shabakadda badbaadada, nabdoonaanta shabaqa
25 Maarso 2020 at 19: 30
Uma muuqato wax aan macquul aheyn in Jensen uu ku dhiiri geliyo madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro baahintiisa caawa
Xusuusnow in tani ay qayb ka tahay istiraatiijiyadda laba-xero iyo mabda 'aaladda badbaadada. Marka: kuwa diida coronavirus ama kuwa dhaha in wax walba hagaagayaan waa la ciqaabi doonaa si xun maxaa yeelay dib u soo nooleynta fayraska (ugu yaraan taasi waa in lagu muujiyo warbaahinta iyo siyaasada si aad u adag marka loo eego tirooyinka). Markaas dhammaan "dhalleeceeya" waa la kiciyaa. Ka fikir kaamam dib-u-waxbarasho, xukun xabsi, iwm.
Trump iyo Bolsonaro ayaa qeyb ka ah ciyaartaas. Impeachment Trump kadib Easter-ka ayaa u muuqda ikhtiyaar macquul ah oo macquul ah oo la filan karo.
25 Maarso 2020 at 22: 25
Kaliya waxaan daawaday telefishanka Jensen, aragtidayda ayaa run noqotay ... (35:25 min.)
28 Maarso 2020 at 11: 51
Sida Trump oo kale, Bolsenaro wuxuu hadda isu muujiyey inuu yahay "nin waalan oo xun xun / nin xaqnimo xad dhaaf ah. Waa wax aad u fudud in la fahmo marka aad aragto sida ay wax u shaqeynayaan.
Jensen ayaa hadda lafdhabar u ah sheeko yar oo ka duwan siyaasadda NL. Siyaasiyiintan ayaa waxaa marin habaabiyay oo ay isticmaaleen warbaahinta ugu sarreysa, sababtoo ah warbaahinta ayaa leh awood aad u badan. (hadaadan sameynin waxaan dhahnay waxaan kaloo sameyn karnaa wilder prime).
Markaa sida laga soo xigtay Jensen annaga (oo soo jeedda) waa inaan u caddeynaa siyaasiyiinta inay tahay inay beddelaan, markaas wax walbaa hagaagi doonaan.
25 Maarso 2020 at 20: 01
Waad saxan tahay inay runta isku daraan.
Waan hubaa in waxkasta ay marayaan heer ruuxi ah hadda. Dad badan ayaa tan ugu maqnaada wax kasta oo ku mashquulsan. Mar haddii aad ugu dambeyntii shaqada ka xorowdid, waxaan wali u leexannaa shabakadda 'Netflix', walbahaarka iyo fayraska.
Xir naftaada, xirida, iska tuur, ka bixid oo aad heer sare.
25 Maarso 2020 at 20: 38
Had iyo jeer waa mid si niyad jab leh loo niyad jabiyo. Ka sokow Amiir Charles oo reer England ah ayaa sidoo kale hadda leh corona (waxaan u rajaynayaa si dhakhso ah lol).
Tirada dadka la yaqaan ee leh 'corona' waa inay hadda ku dhowaato 1 50 400.000. Laakiin dadku waxay u arkaan tan in ay caadi tahay maxaa yeelay waxaa lagu tuuraa warbaahinta iyagoo leh tirooyin (weligaa ha ku mashquulin boqolkiiba boqol !!!) tusaale ahaan tirada dadka adduunka ku nool (sida laga soo xigtay MSM) oo umuuqda inay leeyihiin. Tani waa qiyaastii XNUMX marka loo eego MSM
98% dadka aragta tirooyinkaan ma rumeeyaan waxa ay ka dhigan tahay gabi ahaanba. Haddii 400.000 oo qof oo adduunka oo dhan ay leeyihiin corona tan micnaheedu waxaa weeye in ku dhawaad ​​1 ka mid ah 17.000 oo qof oo dunida ku nool ay runti leeyihiin corona !!!
Aniga iyo walaalkay iyo kuwa kaloo yar oo waliba si farxad leh u soo jeeda, waxaan ku sameeyay sahan yar dhexdooda 100 dad ah oo waxyar ka sareeya celceliska caqliga, waxaan weydiiyay waxyaabo kale:
Tirada guud ee cudurada ku dhaca corona adduunka waa 400.000. Waa immisa boqolkiiba tirada dadka dunida ku nool?
Jawaabta celceliska waxay ahayd (rumeyso ama ha rumeysan) in 400.000 oo qof ay ahaayeen inta udhaxeysa 1% iyo xitaa 10% tirada dadka adduunka. Kaliya 2kiiba 100 ayaa bixiyay jawaabta saxda ah.
Taas macnaheedu waa in markii celceliska reer Dutch (iyo waliba dadka kale ee ka yimid dalal kale) uu maqlo ama arko tirada 400.000 ee cudurka ku dhaca corona adduunka oo dhan, isaga ama iyadu waxay u maleyneysaa in tani ay tahay tiro aad u badan oo dadka adduunka ah (wow horeyba 1% ama 5% ee dadka dunida ku nool waxay leeyihiin corona, intee ayay khatar ku tahay).
Waxaan sidoo kale ka arkay Jair Bolserano. Arrinta xiisaha lihi waxay ahayd in Putin loo oggol yahay inuu ku hor mariyo fikirka ka soo horjeedda ee Ruushka: Putin wuxuu leeyahay waa mid aad u khatar badan oo Russia waa inay raacdaa tilmaamaha Big Brother isla markaana waa in midba midka kale fiiro gaar ah u yeeshaa (Putin wuxuu ka sheegayaa isku mid sida Rutte)
Muxuu ugu dhowaa dhammaan dadweynaha adduunka inay hurdaan? Waxay u muuqdaan inay kuxiran yihiin Luciferian elite-ka. Xaqiiqdii qofku waa inuu awood u yeesho inuu waxoogaa ka fikiro oo xisaabiyo in kaliya qofna uusan adduunka ku lahayn corona? (marka laga reebo dadka caanka ah, ku dhawaad ​​qof walba wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay corona).
25 Maarso 2020 at 21: 32
Sidaad ogtahay waa inaad “dhageysataa khubarada” 😉
Sikastaba ... tirooyinka waa tirooyin maxaa yeelay warbaahinta iyo siyaasadu waxay noo sheegaan tirooyinkaas. Trumanshow? Ma ogid.
Waxa aan ognahay waa in dadku ay qaataan booska in koritaanka lama huraanka ah aad ku aragto tiro yar bilowga ilaa qalooca u soo baxayo sida fallaadho.
Faa'iido ma leh in dadka lagu soo jeediyo tirooyinka ama boqolleyda ama qalooca.
Waa wax ku anfacaya in diirada lagu saaro dadka dhabta ah sida aan u aragnay.
26 Maarso 2020 at 02: 51
Waxa aan mar uun ku ogaa / ku bartay 'waxbarashadeyda' xiriirka dadweynaha ee PR-ka waa in tirooyinka - ama tirakoobka sidii loogu talagalay loogu yeeri jiray - ay yihiin agab munaasib ah (qaab) loo adeegsado. Xiriirka dadweynaha = ciyaarista / lafdhabarta daawadayaasha. Lambarrada waxaad ku “yareyn kartaa” xaalad kasta / duruuf kasta / shaqsi kasto kula hadal giraangiraha. Celcelis ahaan, waxaad meesha ka saartaa qiimaha bini aadamka. Jaantusyadu waa habka loo sameeyo kabuubyo. Farsamada casriga ahi waxay isticmaashaa 2 nambar kaliya - eber iyo midka si loo abuuro xaqiiq laqalaxeeyay. Si loo abuuro dulsaar.
Sabab maahan inaan u nidhaahno tirooyinka iyagu naga dhigaya mid dawakhsan. Hadaad lumiso hanuunintaada, waxaad lumin doontaa wax, oo ah macnaha guud / qaab dhismeedka.
Haddii aadan haysan qaab / qaab guud, waxaad ku qeexaysaa inaad tahay qof kale gacantiisa.
Nambaradu waa astaamo, hab qaab dhismeed hoosaad ah oo loo wada xiriiro (oo leh maskaxda maanka hoose). Dhamaan tirooyinkaas runtii waa faaruq, waxba ma dhahaan, laakiin isku mar ayey wax walba u sheegaan gudaha. Waxaan hadda imid wakhti ay shaqadeennu tahay in aan qeexno sheekada (lafdhabarta, isbuunyada).
Sidoo kale isbarbar dhig lambarada ereyada Ingiriisiga ah ee kuu sheegaya wax ka badan inta aad ku tuhmi laheyd marka ugu horeysa (qiimeynta wejiga) laga shakisan yahay. Kabuubyo waa kabuubyo. Nambarada / nambaradu waa fajaciso shucuur (= dareen hoose) firfircoonaan la'aan (miyir la ') ayagoo ogaanaya haddii aadan ahayn qof bilaaw ah. Nidaamka waxbarashada waxaa loogu talagalay si sax ah taas. Nambarada / nambarada waxaa naloogu soo bandhigay hal foom oo keliya, foomka madhan. Taasi waa sababta ay tahay inaan "baranno xisaabinta" si aan uga baxno aqoonta caalamiga ah. Sikastaba, taasi waa sheeko kale oo qoto dheer. Waxaan rajeynaynaa inaad tan kale sii aqbali doontid oo aad ka fikiri doontid.
26 Maarso 2020 at 07: 04
Tusaale ahaan, in qof loo galiyo hypnosis wadahadal (taas oo ah sababta dadku doorbidayaan inay u daawadaan TV ama kanaalka YouTube), waxaa ugu wanaagsan in liis garee tiro la taaban karo. Tani waxay leedahay saameynta jahwareerka geedi socodka fikirkaaga miyirka leh. Waxay isku dayaan, sidii ay u ekaan lahaayeen, inay raacaan tirooyinka waaweyn ama xisaabinta, laakiin sababta oo ah maskaxdaada ayaa dhibaato ka haysata "joogtaynta", qofka hadlaya wuxuu dhaafi karaa miyirkaaga wuxuuna diyaarin karaa maskaxdaada miyir-qabka ah ayagoo dhigaya xirxiro.
Xiriiriyaha Masterka (ama khabiirka NLP) Robert Jensen sidoo kale wuxuu adeegsadaa farsamadaan.
Sidoo kale waxaad ku aragtaa wax badan dadka sida Jeroen Pauw. Waxaad ku leedahay farsamooyin badan NLP iyo hypnosis wadahadalka, laakiin tirakoobyada iyo tirooyinka si wanaagsan ayey u socdaan.
Taasi waa sababta aad had iyo jeer u haysato saadaasha cimilada dhamaadka joornaalada. Markaa waxaad arki doontaa tirooyin waxaana dib laguugu ridi doonaa gadaal iyo khariidada. Waxaad ka baxsan doontaa khariidadda (hypnotized).
25 Maarso 2020 at 20: 58
Dhamaadka mawjadda hargabka!
Hiigsiga soo socda ayaa imanaya!
25 Maarso 2020 at 23: 38
haddiise aan si sax ah u arko, 11 usbuuc ka dib sanadka 2020 waxaan leenahay dhimashada ka hooseysa xariiqda saldhiga?
26 Maarso 2020 at 07: 37
Sideed ku heli kartaa inaan ahay mucaarad la xakumo Freeland? Waxaan ku noolahay guri guur-guura waxaanan ku tusi doonaa koontayda bangiga. Waa hagaag Janet, i tus xisaabtaada bangiga ka dibna tusi xisaabta kale ee bangiga.
"Haddaan uun isoo wici lahaa, waan hagaajin lahaa"
Iyo liistada Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) waxay ku falcelineysaa boosta iyadoo ay jirto xadgudub caadi ah oo lagu gubo Vrijland (sida ay ku dhaqmaan blog kasta iyo dhammaan warbaahinta bulshada; taasi waa shaqadooda).
Dabcan Janet way hagaajisay fiidiyowyadeeda iyada oo sabab u ah dhaleeceynteyda. Haddii aan "hadda u yeeri lahaa", waxay qaadan lahayd 3 fiidiyowyo ballaadhan oo xayeysiin ah oo loo yaqaan 'Q Anon' khadka tooska ah isla markaana samaysan karto kuwa cusub isla markaana la jaan qaadaya sheekadeeda oo dhan. Haa Janet, sax? Kolder dabcan. Waxaa si wanaagsan loo tixgaliyay, si wanaagsan loo diyaariyey iyo dhiirrigelinta Q Anon ayaa bilaabatay waqtiga saxda ah.
29 Maarso 2020 at 16: 04
Lambarka xisaabta bangiga ee Mrs. J. waxay u dhiibtay qof raba inuu tabaruco. Ff halis ah ??? NL33RABO03 ……… ..3 sidoo kale waa lambarkii ugu dambeeyay. Tiro aad u yar ayaa si qarsoodi ah looga saaray, in kasta oo ay iska tuurtay lafteeda. Laakiin dheh.
30 Maarso 2020 at 00: 07
Jawaabaha Zero iyo +/- 17.000 daawadayaasha, sidee ayey ugu suurtagashay YT
waana inuu dhahaa tiro wacan oo ah daqiiqadaha 6 3, ama 666
waad ku mahadsantahay Janet, burush burush Janet.
Runtii daqiiqad 4; 23 waxay dhahdaa, waxaa laygu hanjabay dil sanad sanad ah dartiis dalaga, Janet Ossebaard the charletan creepy, runtii hey Janet, wac Martin hada
31 Maarso 2020 at 08: 35
31 Maarso 2020 at 08: 36
« Cusbooneysiinta xirida 'Coronavirus covid-19': Markaad toostid oo aad ogaato inaad ku jirtid, maxaad sameyn kartaa?
Duqa Talyaani wuxuu ku hanjabay inuu diro dab-damiyayaal si loola dagaallamo coronavirus »
Guud ahaan Wadarta: 1.287.044
Martin Vrijland op Dhibaatada Corona: goorma ayaa tan la soo dhaafay oo maxaan hadda samaynaa?
AnOpen op Dhibaatada Corona: goorma ayaa tan la soo dhaafay oo maxaan hadda samaynaa?
Sunshine op Dhibaatada Corona: goorma ayaa tan la soo dhaafay oo maxaan hadda samaynaa?
Xaraare Xareed op Dhibaatada Corona: goorma ayaa tan la soo dhaafay oo maxaan hadda samaynaa?